उपत्यकाका सीडीओहरुको निष्कर्ष : सार्वजनिक यातायातको भिडले संक्रमण फैलने जोखिम बढ्यो – Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश ∕ बाग्मती प्रदेश ∕ उपत्यकाका सीडीओहरुको निष्कर्ष : सार्वजनिक यातायातको भिडले संक्रमण फैलने जोखिम बढ्यो
उपत्यकाका सीडीओहरुको निष्कर्ष : सार्वजनिक यातायातको भिडले संक्रमण फैलने जोखिम बढ्यो
झिल्को डटकम माघ ५, २०७८ गते १३:४१ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ५ माघ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सार्वजनिक यातायातको भिडले संक्रमण फैलने जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मंगलबारको तथ्यांकअनुसार देशभर १० हजार २ सय ५८ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा ५ हजार ५ सय ४९ जना काठमाडौं उपत्यकाका छन् । उपत्यकामा बढ्दै गएको संक्रमणको स्रोत सार्वजनिक यातायात भएको प्रशासनको निचोड हो ।
‘सार्वजनिक यातायात नरोकेपछि भिडभाड यसैमा छ,’ भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भनिन्, ‘यो विषयमा माथि रिपोर्टिङ गरेका छौँ । सार्वजनिक यातायातबाट संक्रमण सर्दा सबै कर्मचारी संक्रमित भए भने सेवा नै रोक्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’
अहिले सरकारले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गराउनु आफूहरूको कर्तव्य रहेको उनी बताउँछिन् । ‘स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउने हो । विद्यालय बन्द छ । भेला, जुलुसमा रोक लगाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आदेश पालना नगर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । अनुगमनका लागि हामी फिल्डमै निस्कन्छौँ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पनि यातायातको भिड नियन्त्रण गर्न चुनौती रहेको ठहर छ । ‘यातायातमा भिड हुन्छ । तर हरेकको साझा कर्तव्य हो । एक व्यक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । इमानदार भएर सबैले मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ,’ काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल भन्छिन्, ‘यातायातको व्यवस्थापनको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । अहिले आदेश जारी भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।’
थप गम्भीर अवस्था आयो भने अर्को निर्णयमा जानुपर्ने बताउँछिन्, उनी । जनजीविका पनि हेर्नुपर्छ । गम्भीर स्थिति आयो भने मात्र अर्को निर्णय गर्ने हो । कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न अहिले भिडभाड नगर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भेला, सभा, समारोह नगर्ने हो ।’
सार्वजनिक यातायातमा मापदण्ड पालनामा कडाइ गराउने बताउँछन्, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय । ‘सार्वजनिक यातायातमा भिड छ । संक्रमणको स्रोत सार्वजनिक यातायान नबनोस् भनेर अनुगमनमा निस्कदैछौँ । सिट क्षमता भन्दा बढी राख्नेलाई कारबाही, मास्क र स्यानिटाइजरको व्यवस्था अनिवार्य गराउँछौ,’ उनले भने ।
के लकडाउन होला ?
संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिए पनि देशभर तत्काल लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार छैन । संक्रमणको जोखिम हेरेर निश्चित क्षेत्र बन्द गर्ने तयारी सरकारको छ । ‘संक्रमण रोक्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना, दुई–तीन हप्ता निश्चित क्षेत्र बन्द गर्ने तर लकडाउनमा जाने योजना छैन,’ मंगलबार संसदका शिक्षा तथा स्वासथ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोखरेलले भनेका थिए ।
मपदण्ड पालना नगर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?
सरकारले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गरेको छ । त्यसैका आधारमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाले पनि २७ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् । आदेश पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी प्रशासन अगाडि बढेको छ ।
‘आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । यस आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ,’ सरकारको आदेशमा भनिएको छ ।
मास्क लगाउन अटेरी गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐनअनुसार कारबाही गरिने भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताइन् । ‘मास्क लगाउन अटेरी गर्नेलाई कानुनबमोजिम १ सय जरिवाना र एक महिनासम्म कैद हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘नियन्त्रणमा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्मको जेल सजाय हुन्छ ।’
क्याटेगोरी : समाचार, बाग्मती प्रदेश
ट्याग : #breaking, #covid
स्वतन्त्रहरूले चुनाव जित्नु नै विकल्पको खोजी : बाबुराम
ललितपुर महानगरको २१ वडामा माओवादीका रविन्द्र महर्जन विजयी
भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेनु दाहालले १० हजार मतले…
चरा ठोक्किएको आशङ्का पछि जजिरा एअरलाइन्सको विमानल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको…
७अर्घाखाँचीमा खोलामा डुबेर दुई जनाको मृत्यु
८महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकामा लोसपाका उम्मेदवार सञ्जीवकुमार साह निर्वाचित